सुप्रीया भिटवाल : मलाई पुरुषसँगको सम्भोगमा स्खलित हुँदा विर्य खान मन पर्छ, कुनै असर गर्दैन ? « The News Nepal
सुप्रीया भिटवाल : मलाई पुरुषसँगको सम्भोगमा स्खलित हुँदा विर्य खान मन पर्छ, कुनै असर गर्दैन ?
नमस्कार, मेरो नाम सुप्रीया भिटवाल हो, मेरो उमेर २६ वर्ष भयो । मलाई पुरुससँगको सम्भोगमा पुरुष स्खलित हुँदा म उसको विर्य खाने गर्दछु । केटाको विर्य खाँदा मात्रै मलाई यौन आनन्द मिल्छ । डाक्टर साब यसरी विर्य खाँदा कुनै शारिरिक हानी नोक्सानी गर्द कि गर्दैन ? साथैं यसरी विर्यपान गर्दा महिलाको मोटोपनमा बृद्धि हुन्छ भन्छन् यो सत्य हो कि होईन ? डाक्टर सुबोध कुमार पोखरेल(बरिष्ठ यौन तथा प्रजनन विशेषज्ञ): विज्ञानमा मात्रै होईन विज्ञान भन्दा पहिले प्राचिन कालमा विर्यपानले स्वास्थ्यलाई कुनै असर गर्दैन भन्ने कुरा लेखिएको छ ।
आजको आधुनिक विज्ञान विकास नभइसकेको अवस्थामा जब मानिसमा ज्ञानको अवस्था सृजना भएको थियो उक्त समयमा पनि शुक्रकिट सेवन गर्ने कुराले मानविय जीवनमा कुनै असर गर्दछ भनेर लेखिएको छैन । यौन आनन्द भनेको यौन आसनमा भर पर्ने कुरा हो । सबैभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष भनेको केटाकेटी दुबैको मन मिल्नु पर्यो अनी घर्षणले पनि यौनमा निकै ठुलो प्रभाव पार्दछ ।
यौन विज्ञानमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भने दुई जनाको मन मिलेर गरिएको सेक्स नै सबैभन्दा उत्तम यौन सम्पर्क छ । जब जोडीहरु चरम उत्कर्षमा हुन्छन् उनीहरुलाई खुल्ला छोड्दिनुपर्दछ । अर्को कुरा हरेक सम्बन्धमा विर्य पानले यौन सन्तुष्टि दिन्छ भन्ने त होईन् तर व्यक्ति अनुसार यौन आनन्द लिने सबैको आ–आफ्नै तरिका हुन्छन् । त्यसमा उहाँको विर्य पानको लत रहेछ ।
यदी पुरुषलाई कुनै प्रकारको संक्रमण छैन तपाईको पार्टनर स्वस्थ्य छ र उसको विर्यमा कुनै प्रकारको किटानु छैन भने विर्य सेवनले स्वास्थ्यलाई कुनै असर गर्दैन । यौन सम्बन्धमा हरेक कुराहरु दुई जनाको सहमतिमा हुनुपर्दछ । विर्य सेवन गर्ने कुरा पनि तपाईहरुको जोडीमा भर पर्ने कुरा हो । यदी तपाईको श्रीमान वा केटा साथीको विर्यले तपाईको मुखमा वा पेटमा गएर कुनै प्रकारको संक्रमण हुँदैन भन्ने लाग्छ भने यसले तपाईलाई समस्या हुँदैन ।
अर्को कुरा मोटोपटको विर्यमा फुटो भन्ने तत्व हुन्छ जसले केही हदसम्म असर गर्दछ । विर्यमा हामीले हेर्ने हो भने दुई प्रकारको तत्व हुन्छ । एउटा त शुक्रक्रिट भयो अर्को भनेको झोल जस्तो तत्व पनि हुन्छ । फुटोहरु मिलेर विर्य निर्माण हुने गर्दछ जसमा कार्बोहाइड्रेड जस्तो तत्व हुन्छ जसले मोटोपन बृद्धिमा केही असर गर्न सक्छ । तर मोटोपन हुन्छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था भने आउँदैन् । यो सामाग्री टिभि टेडेको कार्यक्रम यौनका कुराबाट लिइएको हो । उक्त भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।